Indlela yokugqoka umntwana ngomtshato: ifoto. Iingubo zokugqoka imantombazana emtshatweni, isambatho somfana
Imitshato emininzi imikhosi apho abantu abamenywayo baninzi, ngoko ke abantwana abakubhiyozelayo abaqhelekanga. Abafana abancinci kunye namantombazana kuloo mithendeleko kufuneka bajonge kakuhle, kwaye ukubonakala kwabafundi abazali babo baphendula. Iingcebiso malunga nokugqoka abantwana umtshato, uya kufumana kweli nqaku.
Indlela yokugqoka umntwana ngomtshato
Mhlawumbi, wonke umama ufuna umntwana wakhe abe mhle kunabo bonke abantu, ingakumbi kwiholide ebalulekileyo. Ngethamsanqa, ii-workshop zanamhlanje kunye neejoni zokugqoka iilons zinika iindawo ezahlukeneyo zokugqoka kungekudala kuphela, kodwa kubantwana.
Ukuthabatha umhlobiso wentombi, kubalulekile ukuba ungayiqwalasela kuphela ubuhle bayo, kodwa nendlela eya kuhambelana ngayo nendlela yomtshato. Umzekelo, ukuba umbhiyozo ugujwa kwisihloko esithile, ngoko umntwana kufuneka agqoke ngokufanelekileyo.
Kwimeko apho umtshato uhlotshiswe kwibala elithile, kubhetele ukukhetha ingubo yomthunzi ofanelekileyo. Kukhangeleka kakhulu izinto ezinokuthi zichazwe kunye nemiyalelo yabasetyhini okanye ngokuhlobisa umtshakazi. Ngemvume yomntu omncinane, unxibe umntwana kwikopi encinane yomtshato. Oku kuya kuba yinyani ngokunyanisekileyo ukuba intombazana inendima encinane kuloo mthendeleko, umzekelo, ukuba umntwana uhamba nomzila womtshakazi.
Izambatho zomtshato zamantombazana kufuneka zikhululekile. Izambatho eziluhlaza kunye nokuqinisa i-corsets azifanelekanga kwiingubo zomntwana, kuba iimokelo ezinjalo ziya kwenza ukuba ungaziva ukhululekile kakhulu - gcinani engqondweni ukuba abantwana bahlala behamba. Kwiingubo ezingenakuthathaka, intombazana iya kulufumana kunzima ukudansa, ukuzonwabisa nokuthatha inxaxheba kwimincintiswano eyahlukeneyo. Ukuphazamiseka okunjalo kuya kuthintela ngokukhawuleza isimo sengqondo somntwana.
Imifuno ekhuselekileyo yamantombazana yomtshato yindlela ekhethwa kakhulu, ekhethwa ngabaninzi abaninzi. Ezi zindlela zihlala zikhangeleka ezifanelekileyo kwimibhiyozo efanayo kwaye zikhangeleka ngokukhethekileyo kubantwana abancinci. Iingubo zokugqoka iimantombazana emtshatweni ziqhelekile zihlotswe ngeentyantyambo, iimbhokhwe, iidbhoni. Ukuze uhambe kunye, kufuneka ukhethe nezicathulo ezintle kwaye zikhululekile, eziza kudibaniswa ngesitayela kunye nombala ngendlela eqhelekileyo. Ungalibali ukuyenza umntwana abe nekhanda elihle.
Yintoni oya kuyo kwimitshato yomfazi
Yintoni efunekayo ukuya emtshatweni womfazi ukuba abonakale enhle kwaye enhle? Siqokelele amathiphu ancedo ekukhetheni impahla yokuhlwa yangokuhlwa.
Sukela le nkwenkwe
Uhlobo oluhle kakhulu lweengubo zomfana omncinci ngumfana. Njengempahla yenkwenkwe yomtshato, unxibe i-tuxedo, iingubo zokugqoka, i-suit-piece piece kunye nezinye iindlela ezikhethiweyo ukuze wenze umyalelo kwi-workshop efanelekileyo. Esikhundleni somtya omude, kuyafaneleka ukuba usebenzise ibhabhathane elihle okanye intambo emhlophe yentamo. Kule meko, kubalulekile ukulandela imigaqo yokulula. Iingubo akufaneleki ukunyanzelisa ukuhamba ngexesha lokuhamba kunye nemidlalo esebenzayo.
Unomdla kakhulu ukhetho xa umntwana egqoke ikopi encinci yengubo kayise. Ukuba kukho intsapho kunye nabantwana bobulili obuhlukeneyo emtshatweni, intombazana inokugqoka iingubo ezifanayo kunye nonina, kwaye igqoke le nkwenkwe ngendlela efanayo noyise. Ibukeka buyi-stylish, inhle kwaye ibhenkcela ezinye iindwendwe.
Yintoni eya kumtshato womntu
Umtshato uyisiganeko somvakalisi ngamnye ukuba angakhange akhangeleke. Funda iingcebiso zethu malunga nendlela yokugqoka umtshato womntu.
Abantwana beminyaka yobudala besazibonela ngokubonakalayo. Bayesaba ukukhanyela okanye bahluke kakhulu kwabanye. Ngenxa yoko, ungambathanga umntwana wakho kwiingubo ezingenasiphelo. Izibopho ze-Spider-Man, uCarlson, i-Dunno kunye nabanye basindisa ukusebenza kwentsasa kwi-kindergarten. Ngethuba lomtshato, zama ukudala umfanekiso wesitayela kunye nenhle kwi-crumb yakho.
Ukuthuthuzelwa kunye nokulungelelanisa izambatho zabantwana ziimpawu ezichazayo. Ubuhle akufanele bufune umnikelo kule meko.
Musa ukugqoka izambatho zokukhula. Ingubo yohlwaya okanye intambo eqinile kwintsana yakho akunakwenzeka ukuba igqithwe kaninzi, emva komtshato, imeko enjalo ayinakufakwa kungekudala. Kodwa ukuba isambatho seeholide sihlala sibi kwaye sibonakale sikhulu kakhulu - umfanekiso wesitayela uzakuchithwa.
Ukuba unqamlekileyo uthatha inxaxheba kwimicimbi yomtshato, kunengqondo ukuthabatha iimpahla zakhe ngononophelo olukhethekileyo, kodwa ukuba wena kunye nabantwana bakho bamenywa njengeendwendwe eziqhelekileyo, ngoko akumele ulandele ikhowudi yokugqoka.
Abazali bayazi ukuba abantwana, ngakumbi abantwana abancinci, bahlala bengcolileyo. Xa kwenzeka umonakalo ongalindelekanga kweso sambatho okanye ukugqoka, kwakunokwenzeka ukuba utshintshe iimvuthu zibe yinto elungileyo, thatha iingubo zokugqoka kunye nawe. Kungaphinda kufuneke ukuba umntwana angakhathazeki kwisidlo somkhosi.
Xa ukhetha ingubo, qwalasela ixesha lonyaka kunye nemozulu. Ngomcimbi wehlobo, kungcono ukhethe izambatho ezincinci kunye neendwangu zokukhanya. Gwema izinto zokwenziwa komsebenzi - kuphela ukugqiba kungenziwa. Yonke into eqhotyoshelwe kumzimba kufuneka ibe yendalo. Into efanelekileyo yokugqoka izambatho zabantwana - ikotoni, ilinen, iboya. Ebusika, kufuneka ukhethe iingubo apho umntwana engagcini khona kwisitrato kwaye angagqibekanga kwigumbi. Ukuba le nkwenkwe igqoke istifiketi, uya kuba nethuba lokususa ibhatyi lakhe. Ngaphezulu kweengubo, le ntombazana inokugqoka i-sweater, engayithatha kwindawo yokutyela.
Izicathulo zentsana nazo kufuneka zikhululeke kakhulu. Amantombazana angakhetha izicathulo kwiqhekeza okanye kwisithende esisezantsi. Qaphela ukuba i-crumb iya kunyanzelwa ukuba ichithe kwizihlangu zonke iintsuku, eninzi zazo ziya kufuneka zihambe. Ngako oko, akukho nto ifanele ixutywe okanye ifakwe kuyo. Ngokuqinisekileyo, izicathulo zifanele ukufaneleka kwisitayela kunye nombala wokugqoka izambatho.
Izikhwama zomtshato - iinkcukacha ze-wardrobe zenkcazo, ugxininisa impawu yomfanekiso owenziwe. Siza kukuxelela indlela yokukhetha izicathulo ezifanelekileyo zomtshato.
Umtshato kwisiqithi kwi-swimsuits
Ndiza kutshata nomntu othandekayo
Indlela yokukhetha amacenge omtshato: iingcebiso eziwusizo
Ukukhulisa isibindi somntwana
IiVithamini kunye ne-lozenges ziyintloko kwizempilo?
U-Ksenia Borodina no-Kurban Omarov bachitha i-honeymoon eTurkey
I-pumpkin pudding nge ukhilimu omuncu
Isobho se-Cheese kunye ne-salmon
I-Fungus - isilonda esikhuselekanga sikhumba
I-Avant-garde classic: indlela yokudibanisa izitya ngezinto zakudala
Iifatata ezidibeneyo ngamakhowe
Ngaba ndifanele ndiyisele i-hormonal contraceptive?
Ukuhlaziywa kwamaski ebusweni
I-Alimony yomntwana oqhawule umtshato
Kuthekani ukuba loo mntu ungaphantsi kwintombazana?
Umama wezoshishino angakunqumla njani "ubunzima bomama"?
Ukunyuka kwesisindo kunye nesilariyilri
I-Horseshoe - uphawu lolonwaba okanye umlindi ovela kwimikhosi embi?